यस्तो छ नायिका अाँचल शर्माले गालि पाएपछि डिलिट गरेकाे फेसबुक स्टाटस (स्टाटससहित)::Digital News Paper
यस्तो छ नायिका अाँचल शर्माले गालि पाएपछि डिलिट गरेकाे फेसबुक स्टाटस (स्टाटससहित)
नायिका आँचल शर्मा पछिल्लो समयमा स्टाटसको कारण विवादमा तानिएकी छिन् ।
काठमाडौं बाहिर फिल्म ‘ब्ल्याक’को प्रचार गरेर फर्किएपछि उनले फेसबुकमा लेखिन्, ‘रुँदै रुँदै लगानी गर्ने अनि कलाकारिता गर्ने देखेर हाँसो लाग्यो।’ यो स्टाटसले उनको घमण्ड देखिएको, सिने नगरीमा भर्खर आएकी नायिकाले ठूलो कुरा गरेकोजस्ता आरोप मात्रै लागेन अर्की नायिका पूजा शर्मा माथि प्रहार भयो भन्ने सम्मको चर्चा चुलियो। विवाद बढ्दै गएपछि आँचलले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस डिलिट गरिन्।
यस विषयमा नायिका पूजा शर्मा स्वयम् भने आँचलको स्टाटस कसलाई लक्षित थियो थाहा नभएको बताउँछिन्। ‘यदि म माथि लक्षित थिएन भने आँचलले आफ्नो स्टाटस डिलिट नगर्नु पर्ने हो’, नेपालखबरसँग कुरा गर्दै पूजाले भनिन्, ‘हामीबीच त्यस्तो घनिष्टता वा वैमनष्यता केही पनि छैन। आँचलसँग मेरो राम्ररी बोलचाल पनि छैन। सबै समाचारमा मेरो नाम मेन्सन छ। मैले केही बुझ्न सकिरहेकी छुइन्ँ।’
आँचल पनि पूजालाई तोकेरै नलेखेको दाबी गर्छिन्। ‘भर्खर म ब्ल्याकको प्रचारप्रसारमा काठमाडौं बाहिरबाट आएकी थिएँ। त्यो यात्रामा मैले जे देखेँ, मनमा जे लाग्यो त्यही लेखेकी हुँ। पूजा शर्मा रुँदैछिन् भन्ने मलाई थाहा थिएन। मैले स्टेटस लेख्दै गर्दा पूजाजी रोएर बसिरहनु भएको थियो र ? अनि मैले आफ्नो व्यक्तिगत विचार फेसबुकमा लेख्नै नहुने हो र ? अब मैले नाचेको स्टेटस लेखौलाँ अनि फेरि फलानो नायिकालाई व्यङ्ग्य गर्यो भनेर भनिदिने त ?’
कसलाई थियो त तपाईँको व्यङ्ग्य ? भन्ने नेपालखबरको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘सिने नगरीकै मान्छेलाई थियो। यहाँ सिनेमा बनाउने र कलाकार बन्ने रहर धेरैलाई छ। त्यसरी मरिहत्ते गरेर आउने धेरै देखेँ। त्यही कुरालाई मैले लेखेँ।’
‘मेरो स्टाटसले पूजा जीलाई व्यङ्ग्य गरेको भनेर समाचार आएपछि अचम्म लाग्यो’, उनी भन्छिन्, ‘तर मलाई कसैले पनि एक पटक समाचार लेख्नु अघि सोध्नु भएन। गाली र समाचार आएपछि मैले त्यो स्टाटस नै डिलिट गर्नु पर्यो। यो त कस्तो भयो भने नि चोरको खुट्टा काट भन्दा चोरले खुट्टा उचालेजस्तो भयो।’
पूजा जी र तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ त ? आँचल भन्छिन्, ‘उहाँसँग मेरो केही सम्बन्ध नै छैन। औपचारिक कार्यक्रममा हाइ हेल्लो बाहेक त्यस्तो राम्रोसँग बोल्न पनि पाएको छैन। जब कसैसँग मेरो निकटता छैन भने ऊ सँग मेरो झगडा किन पर्छ र ?’ यो कुरा नायिका पूजा शर्मा पनि स्वीकार गर्छिन्। आखिर किन आयो त आँचलको स्टेटसबाट पूजालाई प्रहार गरेको भन्ने खालको समाचार? आँचल र पूजा दुवै भन्छन्, ‘खोइ थाहा नै छैन।’
मैले सलमान खानको सबैकुरा सहेकी छुः ऐश्वर्य राय
जब एउटै होटलमा अक्षयकुमार र प्रियंका चोपडा डिनरमा पुगे